Wasiirka Tamarta iyo Biyaha ee Soomaaliya oo is-casilay – Radio Daljir
Wasiirka Tamarta iyo Biyaha ee Soomaaliya oo is-casilay
Noofember 5, 2018 11:20 b 0
Wasiirkii tartamarta iyo biyaha ee Soomaaliya Cabdi Casaiis Xasan Maxamed (laftagareen) ayaa maanta iska casilay xilka.
Shir jaraa’id uu ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa uu ku sheegay inuu fulinayo shuruudihii ay soo saareen guddiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed si’uu ugu tartamo doorashada madaxtinimo ee Koonfur Galbeed.
Wasiirka iscasilay ayaa horay ugu tartamay guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya oo uu kaga guulaystay Mursal Sheekh Cabdiraxmaan isagoona markaasi iska casilay wasiiru dowlaha ganacsiga, kadibna waxaa loo magacaabay wasiirka biyaha iyo tamarta ee Koonfur Galbeed.
Maxay ka wada hadleen Madaxweyne Xaaf iyo Nicolas Haysom ?
Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo baaq loo diray ( dhegayso )